အရောင်းအဝယ်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အရင်းအနှီးတတ်နိုင်သမျှများများထည့်ပြီး အမြတ်ငွေများများဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် FBSက အခွင့်အလမ်းတွေ ယူဆောင်လာပါပြီ.
မြန်မာဖောက်သည်များအတွက် အပိုဆုအစီအစဉ်အသစ်တစ်ခု ရှိနေပါပြီ. "Perfect Money အပိုဆု +၅ရာခိုင်နှုန်း" သည် အပိုငွေထည့်စရာမလိုဘဲ မိမိတို့့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံငွေများ တိုးပွားလာစေဖို့အတွက် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပါ. Perfect Moneyဖြင့်ငွေထည့်သွင်းရင်းနှီးမြှုပုလုပ်တိုင်း အပိုဆု၅ရာခိုင်နှုန်းကို အခမဲ့ထည့်သွင်းပေးသွားပါမည်.
ရင်းနှီးငွေထည့်သွင်းတိုင်းကော်မရှင်ခပေးရမယ့်အစားငွေထည့်သွင်းတိုင်းအပိုဆုလက်ဆောင်များပင်ရယူနိုင်ပါပြီ! FBSနှင့်အတူ အတားအဆီးကန့်သတ်ချက်များကိုကျော်လွှားပြီး ပိုမိုအရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ ရယူနိုင်ပါပြီ.
Perfect Money အပိုဆု၅%အစီအစဉ်အား အတည်ပြုလက်ခံရယူရန်အောက်ပါ လင့်ခ်မှ စည်းကမ်းချက်အပြည့်အစုံကို ဖတ်ပေးပါ: